Maamul-goboleedka Tigreega oo laga joojiyey doorasho ”foowdo” ah oo ay qaban lahaayeen | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Maamul-goboleedka Tigreega oo laga joojiyey doorasho ”foowdo” ah oo ay qaban lahaayeen
Maamul-goboleedka Tigreega oo laga joojiyey doorasho ”foowdo” ah oo ay qaban lahaayeen
(Addis Ababa) 25 Juun 2020 – Guddiga Doorashada Heer Qaran ee dalka Itoobiya (NEBE) ayaa diidey qorshe uu Maamul-goboleedku Tigreegu ku qaban lahaa doorashooyin maxalli ah oo heer goboleed ah.
Guddiga NEBE ayaa diidista u cuskaday in aanay wax doorasho ihi ka dhici doonin gudaha Itoobiya inta laga qiimaynayo cudurka faafa ee COVID-19, kaasoo horayba u hakiyey doorashadii 6-aad ee heer qaran ee dalkaa ku qabsoomi lahayd.
Maamul-goboleedka Tigreega ayaa horay Guddiga NEBE ugu soo dirsaday codsi ahaa inay qabanayaan doorashada maxalliga ah, sidaa darteed, uu Guddigan oo heer Federaal ihi siiyo rukhsad iyo taageero kale oo saanadeed iyo mid farsamo, balse waa laga diidey.
Laba todobaad kahor, ayuu Aqalka Federayshinka Itoobiya (HoF), wuxuu go’aamiyey in muddada loo kordhiyo DF iyo kuwa Maamullada, iyada oo doorashooyinka la qabanayo muddo 9 bilood ilaa sanad ah oo ka bilaabmaysa goorta uu dhamaado dhibka karoonuhu oo aanay jirin halis caafimaad oo bulshada kasoo gaari karta.
Previous articleXaaladda Xamdi lagu diley waa mid XANUUN badan (DF waa inay arrimahan la xaashaa)
Next articleDHEGEYSO: Waalidiin ka dhega adaygay in ay ilmohooda iskuullada u diraan & dood WAAQICI ah oo ay keeneen